Ma Rikoodhe Aan Jirin Ayaa La Siiyey Lionel Messi? MARCA Oo Soo Bandhigtay Xaqiiqadaha Rikoodhihii Barcelona Ee Xalay - Latest football news
Ma Rikoodhe Aan Jirin Ayaa La Siiyey Lionel Messi? MARCA Oo Soo Bandhigtay Xaqiiqadaha Rikoodhihii Barcelona Ee Xalay
Barcelona ayaa rikoodhe lagu abaal-mariyey daqiiqaddii 12aad ciyaartii ay xalay 6-1 kaga adkaadeen Sevilla ee lugta labaad ee tartanka Copa del Rey.
Messi ayaa dhulka ku dhacay, waxaana uu garsoorihii kulanka dhexdhexaadinayey u cararay halka laga laago rikoodhaha, isaga oo tilmaamaya go’aanka uu gaadhay oo ah in khalad lagu galay Messi, waxaana kubadda laagtay Philippe Coutinho oo Leo uu u daayey kubadda, laakiin goolkaasi waxa uu fure u noqday goolal kale oo sida daadka ugu socday goolka uu waardiyaha ka ahaa Juan Soriano.
Shanta gool ee kale waxa ugu daray Rakitic, Coutinho, Sergi Roberto, Suarez iyo Messi.
Haddaba, garsoore hore, Juan Andujar Olivier oo idaacadda Marca falanqeeye uga ahaa ciyaartan ayaa kasoo horjeedsaday go’aanka garsooraha, waxaana uu tilmaamay in haba yaraatee aanay jirin sabab rikoodhe lagu siiyo Messi.
Oliver waxa uu tilmaamay in muuqaalladii lasoo bandhigay ay muujiyeen in aanu Quincy Promes khalad ku gelin Messi amaba aanu taabanin, haddii ay wax jireenna ay ahayd isku-dhac yar oo lugahooda ah oo aan ahayn khalad lagu dhigo rikoodhe.
“Sawirrada telefishanadu waxay muujinayaan in aanu rikoodhe jirin, mana cadda in Promes uu riday laacibka reer Argentine.” Sidaas ayuu ku dooday Andujar Oliver.
Si kastaba ha ahaatee, wax dood ah oo ku saabsan rikoodhan kama imanin dhinaca Sevilla, kuwaas oo iyaguba iska khasaariyey rikoodhe ay ciyaarta barbar-dhac 1-1 kaga dhigi lahaayeen daqiiqaddii 27aad, markaas oo Banega uu awoodi kari waayey inuu goolhaye Jasper Cillesse kubadda dhaafiyo.